MP3Gain. Incwadana yokufaka kunye nokuguqulela kwiSpanish yeMMP3 | Iindaba zeGajethi
SNgokuqinisekileyo kuye kwenzeka kuwe ukuba ubumamele umculo ngesidlali seMP3 sakho kwaye xa utshintsha ukusuka kwenye ingoma uye kwenye ivolumu inyuke kakhulu, kufuneka uyeke ukudlala kwakhona okanye ususe ii-headphone zakho ngokukhawuleza. Oku kuyenzeka xa uneefayile mp3 egcinwe ngamandla ahlukeneyo evolumu, ngakumbi xa ingoma yokuqala iphantsi kakhulu kwaye kuya kufuneka unyuse ivolumu yomdlali wakho kwaye ingoma iqala ngevolumu ephezulu kakhulu. Iziphumo uyazi ukuba yintoni, ukukhala ezindlebeni kunye nesiqalekiso esingaqhelekanga phakathi kwamazinyo, okanye mhlawumbi ngokuthe ngqo ngokuvakalayo. Kodwa ungakhathazeki ukuba ukusukela ngoku ukuba oku kuyaqhubeka ukwenzeka kuwe kungenxa yokuba ufuna njalo.
MP3Gain yinkqubo enoxanduva lokuhlalutya iifayile ze-mp3 kunye nokubeka zonke kumthamo ofanayo. Lo msebenzi ubizwa ukulungelelanisa umsindo, kwaye iquka ukubeka zonke iingoma kumthamo ofanayo othatha isigqibo okanye ukuvumela inkqubo ukuba ihlalutye iseti yeengoma kwaye yenza ivolumu yomndilili kuphela kwaye ibeka zonke ii-mp3s kwelo xabiso liphakathi.
Lokanye eyona nto ilunge kakhulu yile I-MP3Gain yinkqubo yasimahla onokuyibeka ngeSpanish nakwezinye iilwimi ezininzi kwaye kulula kakhulu ukuyisebenzisa. Kodwa ngaphambi kokuqhubeka ndifuna ukuba ucace malunga noku kulandelayo. I-MP3Gain yinkqubo endala, uhlaziyo lwayo lokugqibela kuhlobo oluzinzileyo luqala ngoJanuwari 2005. Ukungancedi koku kukuba awuzukukwazi ukufumana inkxaso kwinkqubo kwaye kunzima ukuba uhlaziyo okanye uphuculo luvele kwakhona, kodwa Inyaniso kukuba le nkqubo isebenza kakuhle kwaye izalisekisa oko sifuna ukukwenza ngayo, oku kukubeka yonke iMP3 yethu kumthamo ofanayo.
PUkuva oko bekutshiwo kwicandelo elidlulileyo, kuya kufuneka ndicebise ukuba ukhuphele kwaye ufake ingxelo ezinzileyo ye-MP3Gain eyi-1.2.5 kwaye ulibale ngohlobo lweBeta 1.3.4, kuba aluzange luphuhliswe ngokupheleleyo (yiyo loo nto ibizwa ngokuba I-Beta, ngenxa yovavanyo kwaye ayigqitywanga). Ke xa ukhuphela inkqubo kuya kufuneka uqiniseke ukuba ukhuphele uguqulelo 1.2.5. Ungayikhuphela kwi Softonic kule linki okanye kwiphepha lokukhuphela le-MP3Gain indawo esemthethweni ngokuchofoza kwikhonkco mp3okufumana-win-1 2 5.exe.
BEwe, ukuba sele unayo ifayile ekhutshelweyo, masiqale ngofakelo lwenkqubo:
1) Sinqakraza kabini kwifayile ephunyeziweyo "mp3gain-win-1_2_5.exe". Ukuba ubona kuphela "mp3gain-win-1_2_5" kwaye awuboni ulwandiso ".exe" kungenxa yokuba ikhompyuter yakho igcina izandiso zifihliwe. Ukuba ufuna ukwazi ukuba zeziphi izandiso zefayile kwaye zezantoni, ungalifunda inqaku "Malunga nolwandiso". Kwimeko nayiphi na into, emva kokucofa kabini kwifayile, ukufakela kuya kuqala. Cofa kwi «Elandelayo>» iqhosha kwiwindow yokuqala ebonakalayo kwaye emva koko le festile iya kuvela:
2) Kufuneka ukhangele ibhokisi ebonakala ecaleni kwe "Iifayile zoLwimi" (oko kukuthi "iifayile zolwimi") ukuze ukwazi ukufaka iifayile eziyimfuneko Guqula i-MP3Gain ukuya kwiSpanish okanye olunye ulwimi. Emva koko ucofe ku «Okulandelayo>» nakwifestile evulayo cofa ku "Faka». Iifayile ziya kuqala ukufaka kodwa embindini wofakelo uza kufumana le festile ilandelayo:
Kuyo ungafunda lo myalezo ulandelayo ngesiJamani «Für MP3Gain ist eine deutsche Hilfedatei verfügbar, die Sie unter http://mp3gain.sourceforge.net/translation.php downloaden können» ethi «Kukho ifayile yoncedo ngesiJamani ye MP3Gain onokuzikhuphela kwidilesi oyinikiweyo ». Cofa ku "Yamkela" kwaye ufakelo luya kuqhubeka.
3) Xa iifayile zigqiba ukufaka, iwindow iya kuvela apho inkqubo isazisa khona ukuba Ukufakwa kwe-MP3Gain kugqityiwe. Sinqakraza kwiqhosha «Gqiba» kwaye ukuba sishiya ibhokisi ebonakala ecaleni kwe «Run MP3Gain» ihlolwe, inkqubo izakuvula ngokuzenzekelayo.
BEwe ngoku ekubeni le nkqubo ifakiwe kwaye ivulekile uya kubona ukuba akukho lula ukuqonda ukuba ithini kwiscreen ke kuya kufuneka Guqulela kulwimi Ngokuqhelekileyo, siya kubeka ngeSpanish kodwa unokhetho oluninzi lokuguqulela. Ukuze ungabhideki, kungcono ubone umfanekiso oza kulandela kwaye ucofe kuqala kwindawo ephawulwe ngotolo olungasentla komfanekiso kwaye xa uluhlu lolwahlulo kunye nazo zonke iilwimi luvula, cofa kwindawo ekhethiweyo ulwimi.
Sukumilisela oko uya kuba nenkqubo eguqulweyo, njengoko ubona kulula kakhulu ukubeka i-MP3Gain ngeSpanish MP3Gain. Ngoku kufuneka sifunde ukusebenzisa inkqubo ukwenza njalo, ungafunda isifundo endisenzileyo sabizwa «Uwubeka njani wonke umculo ngokufanayo». Umbuliso omuncu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » MP3Gain. Incwadana yokufaka kunye neSpanish yokuguqulela iMP3Gain
molo unjani ukubulisa iviniga aki jeff
Q undicebisa ukuba ndikhuphele umculo nevidiyo?
Ndine-ares kwakudala kodwa andizange ndikwazi ukuyidlulisa okanye ukuyiguqula ividiyo ukuyifaka kwifowuni okanye mp3 ukuba unayo nayiphi na ingcebiso ndingayivuyela ingxelo yakho!
imibuliso ye-vinegary !!
Molo Jeff ngemicimbi engahambelani nenqaku thumela i-imeyile, uyazi njani. Konke okugqibelele.
URicardo Souza sitsho
I-OLA EU INSTALEI OKANYE I-MP3GAINGE XA IBEKA UMGANGATHO UMCULO NELE OKANYE INKQUBO NÃO FUMANA UKULUNGISELELA IIFAYILI EZIMBINI NGOKUQHELEKILEYO, UKUNGENELA XA UCWANGCISELA UMCULO UNGENZA UMCULO UPHAKAMILE KWABANYE. ZIYIPHI I-VCS ezinokundibonisa ngayo njengenkqubo ye-OPÇÕES? I-EU IKHETHWE OKANYE INOMBOLO 89! YINTONI OKANYE INOMBOLO YOKWENENE OKANYE INKQUBO ENOKUQHUBA IIFAYILE ZOMCULO?
Phendula uRicardo Souza
Ndiyikhuphele le nkqubo kodwa ndinengxaki.
Ndibeka iingoma ezininzi ukulinganisa ivolumu kwaye, kuyinyani ukuba ibonakalise impazamo kodwa iyaqhubeka netyala kukuba iingoma ezininzi ndizitshintsha zongezwa kwi-tmp kwaye andisayiva, ndingazifumana njani? oku kwenzeka? Enkosi kunye neminqweno emihle, ubeyinyani yokwenyani
Ewe, eli lixesha lokuqala ukuva ngale ngxaki kwi-MP3Gain. Isenokuba ngenxa yofakelo olubi, kodwa ukuba uthi ikunike ingxaki?
Andinalwazi lokuba ungazibuyisa njani, andiqondi ukuba inokwenzeka. Uxolo 🙁
Ndizamile ukufaka i-MP3gain kwaye i-XP indixelela ukuba ifayile ilahlekile, (ndicinga ukuba ikhowudi), iphepha elisemthethweni lithetha into enjalo ukuba ifayile kufuneka ikhutshelwe kodwa, kuba ikwiNgesi, andiyiqondi kakuhle into oko kuthetha nokuba ungayenza njani…
Inkqubo ebalaseleyo ... Ndiyisebenzise kwifolda yomculo weselfowni yam (motorola K1) kwaye ngoku ndiyiva kakuhle!
Ingcebiso: qala usebenzise ivolumu 105 ... kwaye ibingxola kakhulu ngasemva .. Ndiyathanda ukumamela ngokuvakalayo nangokucacileyo .. !! Ndicebisa i-98-100!
Enkosi ngeli galelo libalulekileyo leviniga!
Le nkqubo ilula kwaye kulula ukuyisebenzisa ... hayi njengama-oteos abubuxoki!
Kude kube lixesha elizayo kwaye iphepha lakho leviniga liqhubeke nokukhula !!
UDiego Cajicá sitsho
Nceda ukuba ungandithumelela inkqubo ye-mp3Gain ngale ndlela yokuyifaka. Enkosi
Phendula u-Diego Cajicá
Sawubona iviniga, ndikwafakela i-mp3gain njengoko ubonisa amanyathelo oza kuwalandela, ndonyusa umthamo weefayile zeaudiyo ezininzi kwaye zazintle, kodwa ke xa ndilayisha ezinye iifayile ze-mp3 ndafumana impazamo kwaye yayingasadlalwa. igcinwe njengefomathi ye-TMP, Kodwa emva koko ndibuyele ekulayisheni ifayile enye ye-mp3 endiyincamathisileyo ukusuka kwenye ifolda apho, iyasebenza nje, kutheni le viniga? ...
@Jorge andinalwazi 🙁
Kuhle kakhulu kwaye kuchazwe kakuhle, enkosi kakhulu.
Khuphela le nkqubo, kodwa andazi ukuba ndingayinika njani amaxabiso afanelekileyo.
Yeyiphi ivolumu ekucetyiswa kwaye yeyiphi i-decibel?
Ndinokutshintsha kuphela inyani kwaye enye itshintshwe ngokuzenzekelayo lulwalamano olukhoyo phakathi kwevolumu-dB.
Ndabeka ii-mp3s ezinesandi esiphantsi kunye nesandi esiqhelekileyo mp3 ndaza ndawunciphisa wonke umthamo.
Ndingafunda phi ukuba ndiyisebenzisa njani. Enkosi
ukuthandabuza okufanelekileyo. oku kuyitshintsha ngokuqinisekileyo ivol okanye ikopi yefayile kwaye ndiyiphindaphinde
Ndenza yonke into ngaphandle kokufaka i-folda yesiqhelo kumdlali wam, andazi ukuba ndenze njani
Ndingayigcina njani ifayile endiyibonisayo kwinzuzo ye-mp3 ukuze ndikwazi ukuyivula kubo bonke abadlali
Faka i-MP3gain, layisha ifolda ofuna ukuyibeka kwinqanaba lesandi, xa sele ulayishiwe, leliphi inyathelo oza kulithatha ukulinganisa zonke iifayile zomsindo kwinqanaba elifanayo. Enkosi
Ewe akukho luvo malunga nokusebenza kwayo ...
ukulandela lonke icebiso lakho siza kubona
isebenza njani ... ukulungelelanisa iifayile zomsindo ...
enkosi iviniga indincedile ………………………………………………………….
enkosi intambo yam. Ekugqibeleni ndakwazi ukuyifaka, ingxelo epheleleyo yayiyimfuneko.
UMFANA JR sitsho
NDIFUNA UKWAZI UKUBA Kutheni ezinye iingoma zibanika imicu ebomvu ukuba kutheni
Phendula CHICO JR
Molo mhlobo: Ndingawudlulisa njani umsebenzi oqhelekileyo owenziwe nge-mp3gain kwisidlali sam somculo?
Into endiyibonayo kukuba ndiyayiva nge-pc kuphela. Kodwa ndizifumana njani iingoma zesiqhelo kumdlali wam? Enkosi ngokuphendula. Konke okugqibelele.
Molo Vinegar, faka i-MP3Gain kwaye ulinganise umthamo weeMP3 kodwa inye kuphela endinike ingxaki… ..Ndinempazamo ngexesha lokulungiswa.Bona ingxelo yempazamo? kodwa
Molo jonga, andazi ukuba ndenze njani unyaka nonyaka emva kokuba iingoma ziqheleke, ndingazenza njani kwi-IPOD yam? NDINGABAPHELA KUPHELA KWI-PC NGOKUQHELELA NGOKUQINILEYO KWI-MP3 GAIN
- Ubungqina-.- sitsho
Ndifuna ukubona ukuba ndingayisebenzisa njani i-Mp3gain, andazi ukuba ndiyisebenzisa njani ...: $
Phendula ku-.- FeNoMeNo -.-
Uyi-capo andifumananga ukuba ungayiguqulela njani ... Uxinene, uyazi! +10 sele ziintandokazi 😀
Enkosi kakhulu mhlobo wam, kudala ndikhangela into enjalo
Ndinayo loo nto ndiyifakileyo kodwa xa ndigqiba ukwenza esiqhelo andinakuphinda ndiyisebenzise le nkqubo kwakhona ndifumana ikhowudi yempazamo kwaye kuya kufuneka ndiyifake kuphela xa ndiza kuyisebenzisa
Phendula ku andresamsung
Ndiyabulela kakhulu, isifundo sakho sandisindisela umsebenzi omninzi, impumelelo kubo bonke abahlobo bam, imibuliso evela eGuatemala….
Igalelo elihle kakhulu, enkosi kakhulu, ukwanga
Phendula uEl Joseto Márquez
Indlela yeChile sitsho
Monster, ungaphaya kwayo. Ukugqwesa iposti yakho, ubungqina bempazamo. + 10000000, enkosi
Phendula ngendlela yaseChile
Juan López sitsho
Enkosi! Iinkwenkwezi ezintlanu.
Phendula kuJuan López
Ukugqibelela…. enkosi kakhulu mfondini uyintanda